Iska horimaad dhex maray ciidamada bilayska militariga iyo ciidamada sirdoonka Sudan… – Hagaag.com
Iska horimaad dhex maray ciidamada bilayska militariga iyo ciidamada sirdoonka Sudan…
Posted on 14 Janaayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Iska horimaad ayaa dhex maray bilayska militariga iyo ciidammada guud ee hawlgallada Sirdoonka Sudan maanta degmada Kafoury ee magaalada Khartoum Baxri iyo qeybo kale ee caasimadda Sudan ah.
Waxaa halkaasi ka dhacay Israsaaseyn xooggan ka dib markii ciidamo ka tirsan sirdoonka ay ka sameeyeen mudaaharaadyo sedex ka mid ah goobahooda, iyaga oo dalbanayey xuquuqdooda adeegooda kadib, kadib markii la gaaray go’aanka ah in la joojinayo adeegga sirdoonka, isla markaana ciidanka uu diiday in uu ka mid noqdo oo ay ku biiraan ciidamada taageerada degdega ah.
Mas’uuliyiinta ayaa bedelay magaca Hay’adda Howlgalada, oo ay ka kooban yihiin 13 kun oo dagaalyahanno ah, waxaa la weydiistay inay ku biiraan ciidamada Rapid Support, laakiin hay’ada ayaa diiday doorashadan.
Xubin ka tirsan Golaha Siyaadada, Lt. Gen. Shams al-Din al-Kabbashi, ayaa ku tilmaamay waxa socda “kacdoon millatari”, isaga oo aan meesha ka saarin ikhtiyaarka ah in xoog loo adeegsado.
Wuxuu yiri “Mas’uuliyiinta sare ee Khartoum waxay qaateen go’aanno badan oo lagu xakameynayo kacdoonkan, inta lagu jiro saacadaha soo socda, xasillooni ayaa ku soo noqon doonta caasimadda.”
“Ma caddayn karo ama mana beeneyn karo in ay jiraan arrimo siyaasadeed oo ka dambeeya waxa socda, oo aan ahayn kaliya shaqooyinkooda oo ay u baahan yihiin.
Rai’sul wasaaraha Sudan Abdalla Hamdouk ayaa u laab qaboojiyey muwaadiniinta, isagoo carabka ku dhuujiyey in xaalku gacanta lagu qabtay.
Wuxuu intaas ku daray in dhacdooyinkan “aysan joojin doonin socodkeenna isla markaana aysan noo horseedi doonin inaan ka laabanno yoolalka kacaanka, waxayna muujinayaan baahida loo qabo in la xaqiijiyo iskaashiga hadda jira”, isagoo ku celceliyay “kalsoonida ciidamada iyo ciidamada caadiga ah iyo awoodooda ay ku xakameyn karaan xaaladda.”
Marka laga hadlayo Muhammad Hamdan Daglo (Hamidati), kuxigeenka madaxa Golaha Siyaadada, wuxuu ku eedeeyay agaasimihii hore ee sirdoonka, Salah Gosh, inuu ka dambeeyay dhacdooyinkaas.